ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ (၂၈. ၁၁. ၂၁၀၈) | Pyithu Hluttaw
(က)-ရန်အောင်တိုက်နယ်ဆေးရုံ၊ အနောက်လျှော်ဖြူကုန်း တိုက်နယ်ဆေးရုံ၊ သီးပင်တိုက်နယ်ဆေးရုံတို့အတွက် လိုအပ်သောဆရာဝန်၊ သူနာပြု၊ ဝန်ထမ်း၊ ဆေးဝါးနှင်‌့ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများအား မည်သည်‌့ကာလတွင် ခွင်‌့ပြုချထားပေးမည်ကို သိလိုခြင်းနှင်‌့ စပ်လျဉ်းသည်‌့မေးခွန်း
(ဂ)-ပြည်တွင်းပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချနေသော ကျွဲ၊ နွားများအား ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်အစိုးရတို့မှ မည်ကဲ့သို့ စီမံခန့်ခွဲပြီး ခွင့်ပြုထားသည်ကို သိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဃ)-လယ်ယာထွက်ကုန်သီးနှံများ၏ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို တောင်သူများတွက်ခြေကိုက်သည့် ဈေးကွက်နှင့်ဈေးနှုန်းရရှိအောင် ပြည်ပဈေးကွက်များသို့ ပိုမိုထိုးဖောက် ဝင်ရောက် လာနိုင်စေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(င)-တောင်သူလယ်သမားများ စိုက်ပျိုးသည့် ကောက်ပဲသီးနှံများ ထိုက်တန်သည့်ဈေးနှုန်းရရှိ၍ အကျိုးအမြတ်များ ခံစားနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံခြားတင်ပို့ရန် ဈေးကွက်ရှိသည့် ကောက်ပဲ သီးနှံများစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(စ)-ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးတွင် သတ်မှတ်အရှိန်နှုန်းထက် ပိုမိုမောင်းနှင်သော မော်တော်ယာဉ်များအား ဒဏ်ငွေပေးဆောင်မှုအခက်အခဲအဆင်ပြေစေရန် (One Stop Services) အဖွဲ့များဖွဲ့၍ ဆောင်ရွက်ရန်အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဆ)-တွံတေးမြို့နယ်နှင်‌့ ကော့မှူးမြို့နယ်ကို ဆက်သွယ်ထားသော ကျေးလက်လမ်းအား အဆင်‌့မြှင်‌့တင် ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင်‌့ စပ်လျဉ်းသည်‌့မေးခွန်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်